Somalia: Al Shabaab oo weerartay Daynuunaay, Baydhabo - Wargane News
Home Somali News Somalia: Al Shabaab oo weerartay Daynuunaay, Baydhabo
Somalia: Al Shabaab oo weerartay Daynuunaay, Baydhabo
Maleeshiyaadka Al Shabaab ayaa subaxnimadii Salaasada weerar gaadmo ah ku qaaday xerada ciidamada dowlada Soomaaliya ku leeyihiin Daynuunay oo 25km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay.
Weerarkan ayaa la sheegay in khasaaro labada dhinac kasoo gaartay, iyadoo aan faahin faahin weli laga bixin tirade dhimashada iyo dhaawaca. Kooxda Al Shabaab ayaa iyadu sheegtay inay gebi ahaan goobtaasi si kooban ulla wareegtay kana saartay ciidamada dowlada Federaalka.
Weerarka maleeshiyaadka Al Shabaab ayaa kusoo beegmaya xili kooxda Al shabaab ay cadaadis dagaal kala kulantay ciidamada AMISOM oo horey ugala wareegay goobo muhiim ah iyo xaruntoodii magaalada Baraawe oo la sheegay inay xarun u noqon doonto maamulka Koonfur Galbeed oo hogaamiyaheeda dhawaan lagu doortay magaalada Baydhabo.
Al Shabaab ayaa dhaq dhaqaaq ka wada gobalada Bay, Bakool iyo Gedo xili ay jiraan qorshe ciidan oo ka socda Baydhabo, Kismaayo iyo Barawe oo ay wadaan ciidamada AMISOM kaasi oo lagu doonayo in Al Shabaab looga saaro gobaladaasi.
Dowlada Itoobiya ayaa dhawaan shaacisay inay diyaarisay ciidamo cusub oo dooneyso inay ku xoojiso hawlgalada la filayo in dhawaan ay ka bilowdaan gobalada Jubooyinka, Bay, Bakool iyo Shabeelada Hoose.
Somalia: Al-Shabab claims twin suicide bombings in Galkayo
Somaliland: Gudoomiye Cirro oo Ka Muquurtay Kulan Maxkamadda Sare Su’aalo kaga Weydiisay Kalsoonidii Xisbiyaddu Siiyeen Madaxweynaha.
Sarkaal Qaramada Midoobey ka tirsan oo socdaal naadir ah ku tagaya K/Waqooyi